ရှီကျင့်ဖိန်က ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်ထားမှုများကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေး - Xinhua News Agency
ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ မှ ဆန်းသစ်သည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆီသို့ တရုတ်-အစ္စရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသီးအပွင့်များခံစားရရှိ
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် ပေကျင်း ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရန် ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေများအား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှီကျင့်ဖိန်သည် လာမည့်ရှေ့လတွင် ပေကျင်းမြို့၌ ကျင်းပမည့် ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ် နှင့် မသန်စွမ်းဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေများကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှီကျင့်ဖိန်သည် အမျိုးသားမြန်နှုန်းမြင့်ဘဲဥပုံစကိတ်ကွင်း ၊ အဓိကမီဒီယာစင်တာ ၊ အားကစားကျေးရွာ ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲချိန်များအတွင်း ထိန်းချုပ်အမိန့်ပေးရေးစင်တာ နှင့် အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ဆောင်းရာသီအားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်းတစ်ခု အပါအဝင် အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် အားကစားသမားများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နေမှုအခြေအနေများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ရှီကျင့်ဖိန်သည် အားကစားသမားများ ၊ နည်းပြများ ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်အားပေးများ နှင့် အသင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ မီဒီယာ နှင့် သိပ္ပံသုတေသနဝန်ထမ်းများ အတူတကွ စုဝေးရောက်ရှိကြသည့် နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားသို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ပေကျင်း ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် မှ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက်တွင် မသန်စွမ်းဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲများကို မတ် ၄ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Xi inspects Beijing 2022 preparations
BEIJING, Jan.4(Xinhua) — Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, inspected the preparations for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Beijing on Tuesday.
Xi visited the National Speed Skating Oval, Main Media Center, Athletes’ Village, Games-time Operations Command Center andawinter sports training base, learning about Games preparatory work as well as Chinese athletes’ preparations for the Games.
Xi also extended New Year greetings to athletes, coaches, volunteers and representatives of operation teams, media and scientific research staff.
The 2022 Winter Olympics will take place from February4to 20, followed by the Paralympic Winter Games from March4to 13. (Xinhua/Xie Huanchi, Yan Yan, Shen Hong, Yue Yuewei)■
Related Topics:2022 olympicfeaturedXiရှီအိုလံပစ်
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အရှေ့ဘက်ရေပြင်သို့ အမျိုးအမည်မသိဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်
လာအို-ဗီယင်ကျန်း-တရုတ် ရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း တစ်လပြည့်ပြီ